Sir James Paul McCartney MBE(*18. Juun 1942 Liverpool) waaIngiriiskamuusikada, heesaha iyo heesaha qoraaga, xubin hore uga tirsanaa kooxdaBeatles The.
Paul McCartney wuxuu ku dhashay 18. June 1942 ee Liverpool, Isbitaalka Walton. Aabihiis, James McCartney, wuxuu ka yimid Ireland wuxuuna ahaa kaniisad. Wuxuu wax badan ka soo shaqeeyay noloshiisa, laakiin waxa ugu wanaagsanaa loo yaqaano muusigga jazz. James wuxuu lahaa qolkiisii ​​jazz oo wuxuu la ciyaaray buun, piano, clarinet, iyo qalabka kale ee dabaysha.
Paul McCartney wuxuu u dhashay waalidiinta Irish (James McCartney iyo Mary Patricia Mohin). Annagoo wada jirna Brother Michael (oo hoos timaadda magaca Mike McGear, wuxuu ku dadaalaa koox fanaaniin ah oo iskudhaf ah), waxay ku soo kordhay iimaanka Catholic. Hooyo ayaa ku dhintaykansarkanaaska marka Paul 13 uu ahaa sanado. Markii uu caruurnimadiisii ​​uu aabbihiis iibsaday markii ugu horeysayguitariyo tan iyo markii uu horey u soo duubay buunshaha iyo piano isaga oo u gaar ahjazzkooxdu waxay Bawlos u dhiibtay casharka koowaad ee muusigga. Wuxuu aqoonsaday iskuulka Machadka LiverpoolGeorge Harrisonwaxayna bilaabeen inay bartaan guitar (oo xiiseynaya - Bawlos waa gole gacanta bidix leh oo ciriiri ah oo qoorta lagu hayo qoorta dhinaca).
Taariikhda kooxdaBeatles Thebilaabay sanadka1957, marka Xajka eeIngiriisi WooltonBawlos wuxuu u soo bandhigay isagaJohn Lennon, oo aqbalay kooxdaShan Ragsida guitarist. Waqtigan xaadirka ah, xiriirka caanka ah ee caanka ah ee waqtiga oo dhan -Lennon/ McCartney.Lennoniyo McCartney ayaa markaa bilaabay in ay iskaashi la sameeyaan qorista heesaha, iyaga oo u qoraya labada sano ee ugu horreeya ee qorista ku saabsan boqolaal. Dhamaan goobaha madadaalada oo la wadaago oo la ciyaaro guitars. Bawlos aad ayuu ugu fiicnaa dugsiga, wuxuu ku hadlaa luuqada Jarmalka iyo Isbanish, laakiin wuxuu jecelay muusikada, sidaas darteed booska barashada wuxuu bilaabay inuu la ciyaaro kooxdaIngiriiskaoo halkii uu ku sii wadi lahaa inuu wax barto, wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo sidii kaaliye darawal ah oo ku shaqeeya qalabka korontada iyo inuu fiilo ku dhajiyo warshadda.
Dayrta sanadka1958kooxdaShan Ragwaxaa loo badalayJohnny iyo Moondogsiyo sanadka1959kooxda ayaa loo badalay, waqtigan oo kaleSilver Beetles. Sannadkan1960kooxda ayaa markii dambe loo badalayBeatles The(erayga hadal -jiriqsigamacnaheedu waabrouk,garaacdaymacnaheedu waagaraaceen, garaaceen, garaaceen ...) waxayna heshay hawlgalJarmalHamburg. Waad ku mahadsantahay bixitaanka guitarist asalka ahStuart Sutcliffqalabkiisa waxaa la wareegay McCartney.
Bawlos wuxuu ahaa kooxdiiBeatles Theilaa sanadkaas1970. Ka dib dhimashada maamulaha kooxdaBriana Epstein, wuxuu noqday hogaamiye aan qorneyn oo ka mid ah kooxda iyo, ka sarre oo dhan, xubintii ugu firfircooneyd. Heesaha ugu fiican iyo tan ugu caansan ee ereyada Beatles waxaa ka mid ahEleanor Rigby(1966),Ma i iibin karto jacayl(1964),Ha la(1970) iyo dhamaanbaHey Jude(1968) aYesterday(1965).
Sannadkan1967Bawlos (sidoo kale xubnaha kale ee kooxda) ayaa bilaabay inay ku raaxaystaan ​​wax badandaroogoiyo sannad ka dib, kooxda oo dhan ayaa tagtaIndiasi aad uga fikirto halkan. Marka lagu daro mukhaadaraadka, Bawlos waxa uu tijaabo ahaan u yahay xubinta koowaad ee Beatles leh muusik elektarooniga ah iyo caleemo gaar ahdhulka hoostiisafilimada. Sida uu qabo hoggaanka Bawlos, waxa kale oo uu soo baxayaa sida naxdinta leh loola macaamilay oo si cad u fahmay (laakiin hadda aad u muuqata) filim, BeatlesTour maqan sixir, buuxamaskaxiyanastaamaha iyo muuqaalada.
Bawlos wuxuu ku noolaa muddo sanado ah oo uu jilaa Jane Asher, laakiin sannadka1967la kulmayLinda Eastman,AmericanSawirqaade On12. Maarso 1969Waxay wada guursadeen siddeed maalmoodJohn LennonsYoko Ono. Bawlos ayaa gabadha Linda ka aqbashay guurka koowaad ee Heather. Wadajir ahaanLindawuxuu lahaa saddex carruur ah - Mary Annu,Stellu Ninuiyo James Louise. Labadaba labada isqabta ayaa had iyo jeer sheegay in laga reebo sagaal maalmood McCartney uu ku jiray1980inJapanesexabsiga (haysashadamarihuany) waxay ahaayeen maalinba wadajir.
Bishii Abriil1970Paul McCartney ayaa si cad uga dhawaaqay kooxdaBeatles(inkastoo kooxdu aanay horey u jirin 1969 horayba), kuwa kalena way raaceen, dhammaantoodna waxay isu dhiibeen mashaariicda iyaga u gaar ah. Bawlos wuxuu baray xaaskiisaLindufuraha furaha iyo ka qaybgalida kooxdeeda cusubbaalashooda, oo la aasaasay sanadka1971. Shaqadii ugu horeysay ee wadajir ah waxay ahayd heesMaalin kale. Inkastoo caqiidada Linda ay dhaleecaysay heesaheeda iyo ciyaarista,baalashoodawaxay ku guuleysteen abaalmarino badanGrammyiyo v70. sanoaad ayay u guuleysteen.
McCartney inta lagu guda jiro riwaayadbaalashooda, 1976
Sannadkan1972ayaa bilaabay kooxda inay safarka ugu horeeya ka dibBoqortooyada Ingiriiskaiyo hal sanno ka dibYurub. Sannadkan1973daabacaanbaalashoodamalaha ugu fiicanalbum Band On The Run. McCartney waxa uu siiyay tiro badancaddaan, mid kali ah ama kooxbaalashooda. Kuwa ugu caansan waa kuwa kor ku xusanRam,Venus iyo MarsamaTug of War.
Bartamaha80. sanowada shaqeynStevie WonderamaMichael Jackson. Isaga iyo xaaskiisa ayaa noqdakhudradoiyo dagaalyahannada xuquuqda xoolaha.
Sannadkan1994Yoko Ono waxay u gudubtaa xubnaha ka haray bandhigyada Beatles Lennon, kuwaas oo ay ku qoraan muusikada. Qeybta ugu dambeysa ee kooxda,Real Lovesi ay uBilaash sida shimbir, ayaa lagu sii daayaa albaabadaaqooneed 1(Apple Records, 21 November 1995) iyoaqooneed 2(Diiwaanka Apple, 18, March 1996). SongHadda iyo ka dib, loogu talagalayaqooneed 3(Diiwaanka Apple, 28, Oktoobar 1996) lama dhammeystirin.
Sannadkan1997McCartney ayaa u ololeeyey, waxaana si sax ah loo tixgeliyey in uu yahay mid ka mid ah muusikada ugu fiican ee 20, ma ahan oo keliya sawirrada cajaa'ib ee la iibiyay. qarnigii.
Sannadkan1998Bawlos naagtiisii ​​ayaa dhintayLindaonkansarkanaaso. Si kastaba ha ahaatee, McCartney sanadka2002wuxuu dib u guuray markii labaad oo uu la socdo qaabkaHeather Millsiyo bisha Oktoobar2003gabadhooda, Beatrice Milly McCartney, ayaa u dhashay iyaga. Muddo dheer kadibna Heather wuu furay.
Bawlos wuxuu sidoo kale naftiisa u ballan qaaday muusikada caadiga ah, isaga oo soo saaraya dhowr farsamo oo qaas ah (sida.Liverpool OratoriumamaDhagaxa dhagaxa). Sannadkan1999waxaa lagu dhuftay Hallowday, waxaana lagu qabtay xaflad sharaf lehLindaiyo sidoo kale bandhigga ugu horeeya ee rinjiyeyaashiisa.
On6. Juun 2004, oo ah xubinta koowaad ee kooxdaBeatles, ayaa lagu qabtay bandhiggaPrague.
On20. February 2008ayaa abaalmarinta ku qaatay abaalmarinta muusikada noloshiisa noloshiisaBilladaha BRIT.
In yimid 2009 1 2 CD + DVD live riwaayad cinwaankeedu Good Evening New York City, uu saxar dhowr habeen oo ka mid ah labada songs ka samaynta + garabyada iyo Beatles hits Paul.
9. Oktoobar 2011vLondonmarkii saddexaad ayuu guursaday Nancy Shevell.
Dhanka kale, ficilkiisa ugu dambeeya ee musikada ayaa weli ah rikoodhKisses On The hoosee sanadka2012, taas oo uu ku abaal mariyay heesaha ugu caansan ee laga helo 30. iyo 40. sano iyo iyada oo loo hindisay 70. dhalashada.
On12. Diseembar 2012wuxuu ku socday riwaayad faaiido leh121212, oo loogu talagalay dhibanayaashaDuufaan Sandy, oo ay la socdaan xubnaha hore ee kooxdanirvana(waxay la kulmeen markii ugu horreysay tan iyo kala-soocidda sanadka1994). Waxay ciyaarayeen heesaha caamka ah "Iska Joojiya Qaar Kale". Waxay u muuqataa in dukumintiga Sound City uu ku taliyay Nirvana oo hore loo yaqaanDave Grohl, kaas oo la filayo in bisha Febraayo lagu daro2013. On 12. Oktoobar 2013 wuxuu sii daayaa albaab cusubNewoo leh heeso magac ah oo isku mid ah.
Sir James Paul McCartney, MBE (* 18 1942. June Liverpool) waa muusikiiste British, heesaa iyo Xisbi, xubin hore oo ka Beatles.BiografiePaul McCartney ayaa waxa uu ku dhashay si ay waalidiinta isirka Irish (James McCartney iyo Maryan Patricia Mohinová). Annagoo wada jirna Brother Michael (oo hoos timaadda magaca Mike McGear, wuxuu ku dadaalaa koox fanaaniin ah oo iskudhaf ah), waxay ku soo kordhay iimaanka Catholic. Hooyo u dhintay kansarka naasaha kolkii Bawlos u 13 sano. In carruurnimada, aabbihiis iibsaday uu gitaar ugu horeysay oo naftiisa sidii hore buun iyo biyaano ciyaaray band jazz ah, Paul siiyey cashar ugu horeysay oo muusiko ah laftiisa. Dugsiga, machadka Liverpool kulmeen George Harrison, oo iyana dhammaantood waxay bilaabeen inay bartaan gitaarka (out of cajiib - iyo Paul waxaa gurran xadhig gitaarka fidiyey muraayad haysta qoorta in dhinaca ka soo horjeeda).
John Lennon iyo Paul McCartney ayaa ka mid ah kooxaha ugu composers ugu guulaha badan taariikhda ee caanka ah hudby.Vznik iyo joojinta Iskaashiga iskaashi The tan iyo bilowgii Beatles The dabayaaqadii 50 ka socday. iyo 60. duulimaad 20. qarnigii oo dhammaaday iyadoo ku dhammaatay burburkii kooxdii 1970. Waxay ku saleysneyd heshiis afka ah oo u dhaxeeya labada qoraa, oo ku qeexan in dhammaan heesaha ay qoraan midkood ama labadaba ay labadoodaba isku saxiixayaan labadaba.
McCartney II waa heestii studio Solo labaad by fanaanada British iyo muusikiiste Paul McCartney. Released in 1980 sanadka, sannadkii ka horreeyay burburkii uu garabyada kooxda muusikada. album McCartney II musically waa mid aad u kala duwan oo ka shaqo hore McCartney ayaa, tan iyo markii ay si sii kordhaysa u muuqataa synths dheeraad ah iyo xubno music tijaabo ah.
Linda Louise McCartney, ku dhashay Linda Louise Eastman (. 24 1941 September New York -. 17 1998 April Tucson, Arizona) ahaa sawir qaade American, keyboardist, dhaqdhaqaaqe xuquuqda xayawaanka iyo xaaskiisa of Paul McCartney.
McCartney ayaa album Solo ugu horeysay, Paul McCartney soo saaray 17. 1970 April ee UK. Waxa xiiso leh oo ku saabsan album waa in McCartney oo dhan alaabtii iyo codad, marka laga reebo vocals taageero qaar ka mid ah ka uu naagtiisa ka horeysay, Linda McCartney qudhiisu duubay. Sida laga soo xigtay in erayadiisii, McCartney ciyaaray on "Bass, fuusto, gitaarka, gitaarka loomana baahno, piano, mellotron, xubin, xylophone iyo qaanso carruurta iyo arrow." Dheeraad ah, sidoo kale waa u xiiso badan oo ay ku jiraan xaddi weyn oo kuwan raadkaygay xarkaha.
James Louis McCartney (* 12 September 1977 London) waa muusigga Britishka, muusigga iyo sculptor ee ku nool London. Waxa uu yahay wiilka kaliya ee sumeeyaha iyo xubin hore oo ka mid ah Beatles, Paul McCartney, iyo xaaskiisii ​​ugu horeeyay, sawir qaadayaasha dhagaxa ah iyo dhaqdhaqaaqa xuquuqda xayawaanka Linda McCartney. On 21. Sebtembar 2010 wuxuu sii daayay James markii ugu horeysay ee uu ku magacaabo "Light Light".
6: Ram (Albaan)
Ram waa gabayada Paul McCartney iyo Linda McCartney oo ay sii daysay 17. MAY 1971, tani waa albaabka kaliya ee loo aanaynayo labadaas. Waa McCartney ee labaad ee laba album, oo la sii daayay inta u dhexeysa dhamaadka Beatles iyo Baalashyada. Ka sokow McCartney iyo muusikada kale, Wings Denny Seiwell ayaa sidoo kale ku jira rikoorka.
7: Xidho ku yaalla Run
Bandhiga Bandhiga waa Paul McCartney & Wings ee saddexda studio album. Uu qoro waxaa ka August qaadeen inay September 1973 ee Lagos, Nigeria. Soo saaraha album wuxuu ahaa Paul McCartney, oo la sii daayay bishii December by 1973 ee diiwaanka Apple. Tani waa albaabka ugu dambeeyay ee McCartney ee lagu sii daayay gurigaan. Albaabka Rolling Stone waxaa lagu soo bandhigay 418. la wadaag riwaayadahaaga 500 oo leh albaabada ugu fiican ee wakhti kasta. photo Author on cover album yahay Clive Arrowsmith oo iyada qabtay Paul iyo Linda McCartney, Denny Laine, Michael Parkinson, Kenny Lynch, James Coburn, Clement Freud, John Conteh iyo Christopher Lee.
Thrillington waa Paul McCartney's album classic, kaas oo uu ku toogtay magaca sax ah ee Percy "Thrills" Thrillington. 29 ayaa la sii daayay. April 1977 ee Boqortooyada Ingiriiska iyo 17. May 1977 ee Maraykanka. Tani waa albaabka qalabka korontada ee Ram. Albaabka waxaa lagu toogtay 1971, laakiin McCartney ayaa go'aansatay in dib loo dhigo sii deyntiisa sababtoo ah wakhtigaas, xaaskiisa Linda, wuxuu aasaasay kooxda Boliska. 1995 iyo 2004, album ayaa dib loo sii daayey CD iyo 21. May 2012 oo qayb ka ah daabacaadda deluxe ee Ram.
9: Nolosha Wild
Wildlife waa qaybta ugu horeysa ee studio ee kooxa English-ka ah. Laga soo daayey Diisambar 1971 by Records Apple iyo wax soo saarayaashu waxay ahaayeen Paul McCartney iyo Linda McCartney. Waxaa la duubay bishii Luulyo iyo Agoosto ee 1971 ee London Abbey Road Studios. Shaxda Maraykanku, Billboard 200 ayaa kaalinta 10aad ku jirta, iyada oo UK Chart UK Chart ay ahayd kow iyo tobnaad. Dalka Mareykanka waxay noqdeen platinum.
10: Iskuxirka Red Rose
Red Rose Speedway waa qaybta labaad ee studio ee kooxa ingiriiska ah. Waxaa la sii daayay April ee 1973 by Records Apple iyo soo saaray Paul McCartney. Waxaa la duubay xilligii 1972 ee London studios kala duwan (Abbey Road Studios, Studios Olympic, Morgan Studios, Trident Studios iyo Studio Studio). Shaxda Maraykanka, Billboard 200 waxay ahayd dabaqa koowaad, halka Boqortooyada Ingiriiska UK ee Chart ay ku jirto shanta sano. Labada waddan, saxanka dahabka ah ayaa la gaarey.
11: Liverpool Collage
Liverpool Sound Collage waa fanaani muusiko ah oo muusikada Ingiriis Paul McCartney, oo lagu sii daayay 2000. Waxaa jira cajalado laga duubo 1964, 1965, 1991 iyo 2000. Qaybo badan oo ka mid ah albumka ayaa ka mid ahaa xubnaha Beatles, oo ah soo saaraha kale ee dhalinyarada iyo kooxda hindida ee Welsh Super Furry Animals. McCartney waxa uu sidoo kale la shaqeynayay koox ku taal Qulqulka Dunida
12: Farshaxanka McCartney
Art ee McCartney ayaa si muusikiiste Paul McCartney album, kaas oo la sii daayay 18 gabbaro. Nofeembar 2014. Waa songs 42 duwidda shuqulladiisii ​​Solo McCartney ayaa, iyo Beatles The, ciyaaro fanaaniinta sida Barry Gibb, Brian Wilson, Billy Joel, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper, Smokey Robinson, dhunkada oo dheeraad ah.
'04 Summer Tour ahaa safar Yurub Paul McCartney ayaa, kaas oo ka dhacay xagaagii 2004.Během safar this Paul McCartney ugu horeysay sidoo kale booqday Czech Republic, kuwaas oo 6. ee June. Wuxuu noqday-xubin hore ugu horeysay ee Beatles The, kuwaas oo riwaayad vystoupil.Záznam ee St. Petersburg ayaa la sii daayey on DVD Paul McCartney in Red Square oo lagu qoro of riwaayad ee Glastonbury mar on DVD The Years.KapelaPaul McCartney McCartney - vocals, Bass, gitaar, klavírRusty Anderson - gitaarka, taageerto zpěvBrian Ray - gitaarka, gitaarka Bass, taageerto zpěvPaul "Wix" Wickens - teebabka, qalab muusiik, gitaar, harmonica, durbaanka, taageerto zpěvAbe Laboriel Jr. - durbaanada, durbaanka, taageerto zpěvTermínyRepertoárJetGot Si Waxaad Hel lagu My LifeFlaming PieAll My LovingLet Me ItYou dabajooga ma arki doono mesh A ee WomanMaybe Waxaan ahay AmazedThe Long Oo fuuli jiray inkastoo RoadIn Of All DangerBlackbirdWe shaqayn karaan Waxaa outhere TodayAll Waxyaabaha Waa Raac PassI'll No OneCalico SunFor ku SkiesI've kaliya arkay A FaceMichelle (marka laga reebo in Paris) Eleanor RigbyDrive Waxaan CarPenny LaneGet BackBand on RunBack ee USSRLive Oo ha DieI've Got A FeelingLady MadonnaHey Me (kaliya ee Glastonbury) JudeYesterdayFollow ha Waxaa bei arkay iyadii Joogtada ThereHelter SkelterSgt. Pepper ee kelida ah Hearts Club Band / EndOdkazyReferenceV The qodobkan waxa loo adeegsaday tarjumaadda qoraalka ah ee maqaalka Paul McCartney 2004 Summer Tour on links Ingiriisi Wikipedii.Externí
14: Venus iyo Mars
Venus iyo Mars waa albaabka studio ee kooxa English-ka ah. Waxaa la sii daayay May Maajo 1975 diiwaanka Capitol waxaana soo saaray Paul McCartney. In American Billboard 200, iyo sidoo kale UK Chart UK Albums Chart, album ayaa gaarey meesha ugu horeysa. Labada waddan, waxay noqotay platinum.
15: Riix si aad u ciyaarto
Riix si aad u ciyaarto waa fanaanad fanaani ah oo ah fanaaniga muusikada Paul McCartney. Waxaa la sii daayay bishii Agoosto by 1986 by Parlophone (UK) iyo Capitol Records (USA), iyo soo saaraha uu la socday McCartney Hugh Padgham. Shaxda Maraykanku, Billboard 200 wuxuu ku jirey jagada soddonaad, halka Boqortooyada Ingiriisku UK ee "Chart Albums" sideedaad. Boqortooyada Ingiriiska, waxay gaartay saxan dahab ah.
Magaalada London waa albaabka studio ee kooxa English-ka ah. Waxaa la sii daayey Maarso 1978 by Parlophone iyo Records Capitol iyo soo saaray Paul McCartney. Diiwaangeliyey inta u dhaxaysa Febraayo 1977 iyo Janaayo 1978 daraasado kala duwan, oo ay ku jiraan Abbey Road Studios iyo AIR Studios. Shaxda Ingiriiska ee "Albums Albums" ayaa kaalinta afaraad galay, halka Billboard 200 ay gaartay kaalinta labaad.
17: Wuxuu ku dhex jiraa USSR
Snova in USSR ah (Ruush: Снова в СССР, Czech: Back ee USSR) waa heestii studio Solo toddobaad by fanaanada British iyo muusikiiste Paul McCartney. Waxaa lagu daabacay 1988 gaar ahaan Ururka Midowga Soafalka. album The oo gebi ahaanba ka kooban yahay versions cover dhagaxa caan ah iyo gabayo xagga duudduuban 20. qarnigii. In 1991, ka dib burburkii USSR ah, album la dunida oo sii daayay dheeriga ah ee hal track bonus.
18: Baalasha Xawaare Sare
Baalasha Xawaare Soodhafka ah waa buug studio oo ka mid ah kooxa English-ka ah. Waxaa la sii daayay March ee 1976 by Records Capitol. Waxaa la duubay laga bilaabo Jannaayo ilaa Febraayo sanadkii Abbey Road Studios ee London waxaana soo saaray Paul McCartney. Jaantuska UK, Chart UK Albums Chart ayaa ahaa kaalinta labaad, halka Billboard 200 uu ahaa kii ugu horreeyay. Dalka Mareykanka waxay noqdeen platinum.
Stella McCartney gabadhii McCartney BiographyStella McCartney wuxuu u shaqeeyay magac caan ah (Chloe, Gucci, Adidas, Karl Lagerfeld), waxay udiyaarinaysay dharka Madonna, Annie Lennox, Gwyneth Paltrow. Waxay heshay abaalmarino dhowr ah.
20: Baalasha (koox muusik ah)
Baalashadu waxay ahayd koox hoose oo dhagax ah oo ay aasaaseen Beatles Paul McCartney bishii Abriil ee 1971. Baalashadu waxay guulo waaweyn ka soo hooyeen 70. sano iyo bilowgii 80. sano, inkastoo xaqiiqda ah in shaqaalaynta kooxdu ay si joogta ah isbeddeshay.
21: ubaxa ku jira Dirt
Ubax ee Dirt waa Paul McCartney ee fasalka siddeedaad, oo lagu sii daayay 1989. sii daayo album la socday safar ee Paul McCartney World Tour.Seznam skladebObsazení Paul McCartney The - vocals, gitaarka loomana baahno, gitaarka korontada, gitaar Bass, gitaar iyo toban-string, gitaar Mexico, piano, synthesizers, fuusto, iyo daf, durbaanka, Celeste, sitar, harmonium, vocals taageerto, mellotron, bong, violin, furayaasha, xoqan
Tug of War waa albaabka saddexaad ee solo studio of British muusikada dhagaxa ah iyo xubin hore ee Beatles by Paul McCartney. Waa jadwalka XCUMX ee hore ee albumka McCartney II iyo sawiradii ugu horeeyay ee rasmiga ah, oo laga tirtiray burburkii kooxdiisii ​​Qoryaha ee April 1980. Thanks to recordings of this album, McCartney lahaa waqti ay dib ula midoobaan soo saaraha muusiga George Martin muddo wakhti ah. Tug of War sidoo kale waa markii ugu horeysay ee album McCartney la sii daayo ka dib geeridii John Lennon, saaxiibkiisa mudada dheer ee ka soo jeeda Beatles.
23: Xusuusta Ku Dhaw Dhamaystiran
Xasuusta dhawaad ​​Full waa heestii studio afar iyo tobnaad by Paul McCartney. In Boqortooyada Ingiriiska waxaa la soo saaray 4. June 2007 iyo Maraykanka maalintii později.Seznam skladebAutorem dhan songs by Paul McCartney "Dance Caawa" - 2:. 54 "Ever goobjoog Hore" - 2: 57 "Eeg Your Sunshine" - 3: 20 "Kaliya Mama Yaqaan" - 4: 17 "Waxaad i sheeg" - 3: 15 "Mr. Bellamy "- 3: 39" Sharaftii "- 3: 19" Dhar guridda "- 2: 22" Taasi Me ahaa "- 2: 38" Cagaha in daruuro "- 3: 24 'House of Wax" - 4: 59 " End of The End ah "- 2: 57" Nood Your Head "- 1: 58Reference
24: Ha Lahaa (song)
"Ha la" (ha u ahaato) waa song ah Beatles The, ka kooban by John Lennon iyo Paul McCartney in 1970, ka dib markii heesaya hees oo kaliya McCartney. Waxa kale oo ay ahayd gabayadii ugu dambeysay ee Paul McCartney ka soo baxday kooxda.
25: Dib u laabashada safarka aduunka
Back in safar World ahaa safar Paul McCartney Yurub, kaas oo ka dhacay guga ee 2003.Po horeysay 6 ciyaaray riwaayada (1 ee Paris, Barcelona 2, 2 iyo 1 in Antwerp ee Sheffield) McCartney qabtay hargabka oo lahaa taariikhaha soo socda ku biiro kooxda Sheffield dhamaadka safarka. Sababo la kadibne jirrada uu lahaa in la bedelo waajihid laba jeer.
26: Cusub (Albaan)
New waa Paula McCartney albaabka lixaadlaha ah ee fanaaniinta Ingriiska ah. Waxaa lagu daabacay 14. Oktoobar, 2013, heesaha muusigga ee Virgin EMI Records, iyo waxa la yidhaa McCartney's first album, oo ka kooban jidad cusub tan iyo 2007, markii Memory Almost Full la sii daayay. Waxaa jira laba iyo toban heeso oo albaab ah, oo leh afar wax soo saarayaal: Mark Ronson, Ethan Johns, Paul Epworth iyo Giles Martin. Sawirada "album Albums" ee UK, ayaa albaabkii kaalinta saddexaad galay; isla meelaynta ayaa lagu gaaray Billboard 200.
27: Ku noqo Qufaca
Dib u noqoshada Egg waa albaabka ugu dambeeyay ee kooxda studio ee kooxa English-ka. La sii daayay 24. MAY 1979 Diiwaanka Columbia ee Maraykanka, Parlophone wuxuu ku sii daayey Boqortooyada Ingiriiska laba toddobaad kadib. Loo duubay waqtiyo kala duwan laga bilaabo Juun 1978 ilaa Febraayo 1979 dhowr daraasado oo kala duwan, oo ay ku jiraan Abbey Road Studios. Billboard 200 ayaa kaalinta sideedaad kaga jirta jadwalka Maraykanka, halka Ingiriiska Ingriisiga ah ee "Album Albums" uu ahaa kaalinta lixaad. Dalka Mareykanka waxay noqdeen platinum.
28: Shaydaan Dabeeci
Orodka Devil Run waa fanaanad fanaani ah oo ah fanaaniga muusikada Paul McCartney. Waxaa lagu sii daayay Oktoobar of 1999 by Parlophone iyo soo saaraha uu la socday McCartney Chris Thomas. Waxaa la duubay laga bilaabo Maarso ilaa Maajo sanadkaas oo ku yaal Abbey Road Studios. Albaabka waxaa ku jira inta badan heesaha heesaha laga soo qaaday 1950-dii, laakiin sidoo kale sedexda asalka ah ee McCartney ayaa ku qoran qaabka heesaha kale. In Billboard 200, albaabka waxaa la dhigey 27. meel.
Flaming Pie waa albaabka albaabada udubdhexaadiyaha ah ee muusikada Ingiriis Paul McCartney. Waxaa la sii daayay Maajo May 1997 oo ay soo saareen Parlophone iyo Capitol Records, waxaana soo saaray McCartney Jeff Lynne iyo George Martin. Laba heesood oo ka mid ah albumka ayaa hore loo diiwaan geliyay 1992, intiisa kale 1995 ilaa 1997. Diiwaangeliyey daraasado badan, oo ay ku jiraan Abbey Road Studios. Tusaale ahaan, heeska "loo isticmaalo in uu xun yahay" waa gabay la leh Steve Miller. Jaantuska Ingiriiska ee Jaalliyada Albaabka UK, iyo sidoo kale Billboard 200, ayaa albaabku wuxuu ahaa dabaqa labaad. Labada dalba waxay noqdeen dahab.
30: Fudud iyo Abuurid ku yaal Guryaha
Fogaanta iyo Abuurista ee Backyard waa fanaani muusik oo ah fanaaniga muusikada Paul McCartney. Waxaa lagu sii daayay 2005 bishii Sebtembar by Parlophone iyo Records Capitol. Soo saaraha ayaa ahaa Nigel Godrich. Chart UK UK Chart ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee US Billboard 200 lixaad. Dalalka qaarkood, wuxuu ku guuleystay saxan dahab ah.
Shalay (turjumaad Czech Yesterday) waa hees kooxda muusikada The Beatles ee 1965 ka Help album! .Ačkoli song waxaa si rasmi ah loogu tiriyey Lennon ah / McCartney ku qoray oo dhan oo kaliya Paul McCartney. song waa caan ah xitaa maanta iyo sida ay Guinness World Records waa gabaygii ahaa kaas oo ahaa in taariikhda music caan versions cover ugu duubay. Waxay sugaysay iyada oo ka sareysa 3000 Albom Caawinaad! ayaa joogtay seddex bilood tan iyo markii la sii daayay tobankii sare ee Ingiriiska. Warbaahinta Mustaqbalka (BMI) waxay ku andacooneysaa kaliya 20. qarnigii, gabaygan waxaa lagu baahiyay in ka badan toddoba milyan oo jeer oo warbaahinta ah.
32: Roobka baabuurta
Rain Driving waa albaabka albaabada udubdhexaadiyaha ah ee muusikada Ingiriis Paul McCartney. Waxaa la sii daayay bishii November by 2001 by Parlophone. Waxaa la duubay laga bilaabo Febraayo illaa Juun sanadkaas oo ku yaala Studio Los Angeles ee Henson Recording Studio waxaana soo saaray David Kahne. Billboard 200 waxaa la dhigey 26 ee jadwalka Mareykanka. meel, UK Map Albums ee 46.
33: Muuqaal Sawirle ah
Caamir Maskaxdu waa filim British ah oo ka soo horjeeda kooxda The Beatles Qof kasta oo aan fahmin sheekada Filimka: Caawinaad, waa adag tahay in la fahmo filimkan. Xubnaha kooxdu waxay bas ka raacaan baska oo ku socda safar aan la ilaawi karin meel kale. Filimka waxaa lagu rinjiyeeyaa jilista Beatles waxayna kudhexaadantahay dabeecada caadiga ah ee Ingiriisiga.
Heather Mills McCartney (* 12 1968. January, Alderhot, United Kingdom) waa model ah British, a dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo xaaskiisa labaad Paula McCartneyho.BiografieNěkolik bilood iyada dhalashada qoyska u dhaqaaqay Washington ka dib. Heather ma fududeyn ilmaha, wiil dhalinyaro ah ayay hooyadeed ku soo laabtay London dib, waxay ka soo cararay gurigaygii oo ku noolaa muddo dhawr bilood ah "jidka". Waxay qabatay shaqooyin ilaa ay noqotey tusaale. Markii ay da'doodu ahayd sagaal sagaal iyo toban, waxay toogteen dhowr sawir oo erotic ah.
"Eleanor Rigby" waa hees kooxda British Beatles The, kuwaas oo qoray waxaa lagu tiriyaa in ay Lennon / McCartney, in kastoo uu qoray qudhiisa Paul McCartney. Bishii Agoosto, 1966 waxaa lagu sii daayay labada qeybood ee A oo leh "Submarine Yellow". Waxay sidoo kale sii daayeen Revolver isla waqtigaas. Sheekada waxaa duubay by farshaxan kale oo badan, oo ay ku jiraan Vanilla Fudge, Chick Corea ama Al Di Meola. Gabaygan waxaa loo magacaabay qofka dhabta ah. Eleanor Rigby waxaa lagu aasay qabuuraha St. Petra ee Woolton.
Kisses on the Bottom waa Paul McCartney ee 15th solo studio, oo ay sii daysay 7. Febraayo 2012. Albaabka waxaa laga heli karaa labada CD iyo LPs. Waxay ka kooban tahay laba iyo toban dabool iyo laba hees oo asal ah. Tusaale ahaan, Stevie Wonder, Eric Clapton, Bucky Pizzarelli iyo Diana Krall, oo soo saaraha Tommy LiPuma.
37: Dhuumaha Nabadda
Pipes of Peace waa dhageysiga solo studio ee fanaaniga muusikada Paul McCartney. Waxaa la sii daayey bishii Oktoobar ee 1983 by Parlophone (UK) iyo Records Columbia (USA). Diiwaangelinta 1980 by 1983 bishii July, 200 ayaa la sii daayay iyo soo saaraha George Martin. Waxaa jira labo sawir oo Michael Jackson ah oo ku sawiran: "Say Say" iyo "Man". Shaxda Billboard XNUMX ee Mareykanka, ayaa albaabkii la dhigay kaalinta shan iyo tobnaad, gudaha Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Ingiriiska UK. Dalal badan ayaa waxay noqdeen platinum.
38: Ka baxsan dhulka
Goobta Ground waa albaab albaab ah oo ay heesto muusikada Ingiriis Paul McCartney. Laga soo daayey Febraayo of 1993 by Parlophone (UK) iyo Records Capitol (USA). La wadaag McCartney oo ay soo saartay Julian Mendelsohn. Billboard 200 ayaa ku dhacday kaalinta toddobaad ee ku jirta jadwalka Mareykanka, halka Boqortooyada Ingiriiska ee Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska ee shanaad.
39: Boqortooyada Boqortooyada
Boqortooyada Ocean-ka waa filimka shanaad ee classic iyo Paul McCartney's first ballet. Waa muusikada waxqabadka baalalka ee isla magaca. Albaabka waxaa la sii daayay bishii Oktoobar ee 2011 Liiska isdaba-marinta Wadooyinka guud waxaa qoray Paul McCartney.
40: Anigu waan jeclahay iyada
Anigu waan jeclahay Waa sheeko ku qoran 1964 by Paul McCartney gabadhiisa Jane Asher. Si kastaba ha ahaatee, labada tiriyey Lennon / McCartney.Skladbu horeysay Beatles duubay oo la sii daayay iyada album Night A Day ee adag. Tan iyo markaas waxa jiray dad badan oo ka mid ah iyada coververzí.NástrojePaul McCartney: vocals, baskytaraJohn Lennon, loomana baahno kytaraGeorge Harrison: gitaarka loomana baahno, dhawaaqaysa dřívkaRingo Starr kongaReference
41: Caawin yar oo ka timid saaxiibaday
"Caawin yar oo ka timid My Friends" waa gabaygii labaad ee albaabka Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band oo ka socda 1967 oo ka soo jeeda kooxda Britishka Beatles. Heesta waxaa qoray Lennon / McCartney (John Lennon, Paul McCartney). 2004, Magazine-ka Rolling Stone waxaa ku jiray 311 liistadooda 500 ee heesaha ugu wanaagsan ee waqtiga oo dhan. Tusaale ahaan, Joe Cocker wuxuu heestaa heesaha oo wuxuu sii daayay albaabka 1969 ee "Caawin yar oo ka timid My Friends".
42: Wadada Abbey
Abbey Road waa albaabka kow iyo tobanka studio ee Beatles. Gabaygii ugu dambeeyay ee Beatles, Let It Be, oo laga sii daayay Abbey Road, ayaa horay loo diiwaan geliyey. Abbey Road sidoo kale waa dukaanka ugu dambeeya ee kooxda.
Sir (Ingiriisi [sɜː] IPA, Czech [Sir] [il?]) Ma xushmad ah ee wax ka qabashada rag isticmaalo wadamada Ingiriiska ku hadlin. Inta badan waxaa loo isticmaalaa in la gaaro sarkaal sare, tusaale ahaan, waaxyaha ciidanka iyo booliska. In Britain iyo qaar ka mid ah dalalka Commonwealth waxaa lala isticmaalaa magaca sida salaantan ama horyaalka difaacaneysa ee geesigeeda peerage hoose ama baronet. Waxaa lala isticmaalaa magaca hore ama magaca oo buuxa, looma isticmaalo magaca u dambeeya (sida Sir Paul McCartney looga qaban karo "Sir Paul" laakiin ma aha "Sir McCartney"). Title Sir ma heli karo mudnaanta, laakiin sidoo kale dhaxli, qabashada Marwo dumar ma u dhigantaa a buuxa, iyadoo la isticmaalayo horyaalka waa sidaas oo qaab takoor.
44: Fadlan Fadlan iji
Fadlan Fadlan ii ah albaabka Beatles ee ugu horreeya oo uu sii daayo 22. Maarso 1963 sida jawaab degdeg ah u guusha guusha singles Fadlan Igu Dareemo Jacayl. Afarta ka mida ee heesaha laga qaaday albaabka, siddeed waxaa lagu qoray lamaane jilaa John Lennon / Paul McCartney.
45: Maalin Kasta
Habeenkii Maalinta Ciriiri (Habeenkii Maalinta Cirka) waa filim majaladda ah oo Ingiriis ah oo ku saleysan qoraalka Alain Owen ee 1964. Filimka waxaa loo bixiyay BAFTA oo ah filimka ugu wanaagsan ee qaybta muusikada / majaajilada 1964.
Beatles for Sale waa albaabka afaraad ee Beatles ee la sii daayo dhammaadka 1964. Waxaa daabacay Parlophone iyo soo saaraha uu ahaa George Martin. Maqaalkani wuxuu ahaa heeso la jecel yahay sida Siddeed Maalmood iyo Isbuuc ama anigu waxaan ahay Loser.
"Submarine Yellow" waa hees by kooxda The Beatles, kuwaas oo qoraaga waxaa loo aaneeyey Lennon / McCartney, inkastoo uu qoray Paul McCartney isaga qudhiisa. Bishii Agoosto, 1966 ayaa ku soo baxday laba garoon oo A-ka ah oo ay wadaagaan "Eleanor Rigby". Isla mar ahaantaana waxay sidoo kale ka muuqatay fanaanada Revolver iyo laba sano ka dib isla magacii iyo magac isku mid ah oo isku mid ah. Qeybta asalka ah ee asalka ah ee koowaad ayaa ugu horeysay jaantusyada UK waxayna qaadatay afar isbuuc si ay u rogto "Dhammaan ama Waxba" oo ka yimaad Muuqaalo Yar. Meelaha kala duwan ee heesaha ayaa socday muddo saddex iyo toban toddobaad ah.
48: Ku noolow oo ha dhinto
"Live and Let Die" waa hogaaminta hogaamiyaha filimka Live iyo Die ee James Bond. Waxaa qoray Paul iyo Linda McCartney oo loogu talagalay Garabyada. Waa mid ka mid ah heesaha ugu caansan, gaaraya 2. meelo ka mid ah Billboard Hot Hot 100 iyo 9. meelo ku yaal UK UK Singles Chart.
49: meel ka mid ah England
Meel ku yaalla England waa Jarrida Sedexaad ee George Harrison, oo lagu sii daayey 1981 diiwaanka Dark Horse. Waxaa la duubay bishii Oktoobar 1979 iyo Febraayo 1981 iyo soo saaraha Harrison iyo Ray Cooper. Heesta "Years All kuwa Ago" waxaa ka go'an in ay xasuusta ka mid ah dabayaaqadii John Lennon iyo ciyaaray kale laba xubnood hore ee Beatles The, Paul McCartney iyo Ringo Starr.